MAXAY U FASHILMEEN URUR DIIMEEDYADA SIYAASADEED? [BAADIGOOB XAQIIQ] (QEYBTII 2AAD) – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Taariikhyahannada ku talaxtagay taariikhda aadanaha, waxay taariikhda aadanaha u qeybiyaan laba casri. Labadaas casri oo ey u kala bixiyeen; b) casrigii tuulooyinka iyo t) casrigii magaalooyinka. Tuuladu waa meel ey hal raas degen yihiin, raaskaas ha noqdo hadduu doono mid qabiil ama dhaqan wadaag ah, ama cibaado wadaag ah (oo hal ilaah isla caabuda, amaba ilaahyo badan) ama mid dhaqaale-bulsho wadaag uu ka dhexeeyo, sida; daaqa xooluhu daaqo, iyo biyaha dadka iyo duunyadu cabaan. Qeexidda tuulo waa meel dadka degani ey isku wada mid yihiin; dhaqan, dhaqaale, fikir iyo cibaado – haddeey doonaan ha kala badsadaan e.
Casriga tuulada oo bilowday dhamaadkii xiligii loo yiqiin casrigii dhagaxaanta (the stone age). Xiligii tuulooyinka, wuxuu kasoo bilaabmaa qiyaastii 10,000 oo sanadood ka hor dhalashadii Ciise (CS), oo qiyaastii ku abaaran xiligii nebi Nuux (CS) – wuxuuna casrigaas ku dhamaaday soo saariddii nebi Muxammad (NNKH). Casrigaas loo yiqiin casrigii tuulooyinka aadanuhu hadba intii isku fikir ah ayaa tuulo isku uruursan jirtay, waxayna ku qasbi jireen dadka tuulada oo dhan iney hal dhaqan iyo hal fikir oo sugan yeeshaan, cid alaale iyo cidii la timaada wax cusub ama ka duwan kan dadka tuulada birta ayaa laga asli jiray. Wuxuuna ahaa sharci ey ku dhaqmaan reer tuuleedku. Si kale haddaan u dhigo, reer tuuleedku waxay isku raaci jireen xumaanta, lamana heli jirin hal qof oo ka reeba xumaanta. Waana sababtaas tan dadkii xiligaas noolaa ey ula dagaalameen Ergooyinkii iyo nebiyadii Alle usoo diri jiray, iyagoo isugu daray dil iyo iney dhulka ka ceyrsadaan, maadaama ey la yimaadeen wax ku cusub bulshooyinka tuulooyinkaas.
Waxay qolo walbaa ku andacoon jirtay ma dhaqankii aabayaasheen baan uga tagnaa waxa rusushaan noo sheegayaan?! Yacnii waxay kasoo horjeedeen sunnada ilaahey ee ah in aadanuhu si joogto ah isku-bedelo oo hormariyo noloshiisa iyo garaadkiisa. Eebe oo dadkaas ka sheekeenaya wuxuu yiri: “waxay yiraahdeen shucayboow ma salaadahaagaa ku fari inaan ka tagno waxay aabahayaasheen caabudi jireen? ama ku fallo maalkanna waxaan doono? adiga waxaad tahay dulbadane toosan (si jees jees ah)”
Markale Eebe oo na tusaalaynaya nooganna digaya inaan meel uun ku dhaganaano oo diidno isbedel, horumar iyo horu-socod iyo inaan dareemayaasheena isticmaalno oo uu ugu horeeyo caqliga – annagoo ku andacoonayna aabayaasheen ayaa sidaas u dhaqmi jiray wuxuu yiri:
“marka gaalada lagu yiraahdo raaca wuxuu Eebe soo dajiyay, waxay dhihi saas ma’aha ee waxaan raacin waxaan ka helnay aabayaasheen (caabudi jireen), oo haddey yihiin aabayowgood kuwaan wax kaseyn oon hanuunsaneyn (miyeey raaci?). Waxay lamid yihiin kuwii gaaloobay mid u dhawaaqay midaan wax maqleyn kaseyna dhowaaqa iyo qaylada mooyee, wax ma maqlaan, ma hadlaan, wax ma arkaan waxna ma kasaan.”
Aayadahaan kor ku xusan waxay na tusaaleynayaan muhiimadda ey leedahay in caqliga la isticmaalo oo horay loo socdo ee aan hal meel uun la yuurarin iyadoo lagu doodayo dadkii naga horeeyay ayaa saan ahaan jiray. Casrigii tuulooyinka wuxuu ahaa casri kaligii talisnimo, casri aadanuhu iska diiday; horumar, isbedel, kala duwanaansho iyo wax alaale iyo wixii cusub – taas ayaana keentay iney ka horyimaadaan jidkii Eebe (SWT) u jeexay aadanaha iney raacaan si ey noloshooda u hormariyaan koonkana ey khilaaafo uga noqdaan oo camiraan. Diidmadaas iyo meel-ku-dhaggaas waxay aadanaha ku hogaamisay burbur, halaag iyo caro Eebe. Sababtoo ah waxay ka horyimaadeen sunnadii Ilaahey ee aheyd; wax alaale iyo wixii Eebe (SWT) kasoo haray iney tiro noqdaan, isbedelaya, aqbalaanna kala duwanaantooda, taladana ey wadaagaan.
Eebe (SWT) wuxuu balanqaaday inuu halaagayo ama cadaabayo cadaab darran tuulo walba oo diida sunnada ilaahey ee aan kor ku xusnay, Eebe wuxuu yiri:
“tuulo aanan halaageyn ma jirto ama aanan cadaabeyn cadaab darran qiyaamaha kahor, waana arin ku qoran kitaabka (lawxul maxfuudka). Tuulana waa sidaan horay ugu soo qeexnay ee ah; degaan yar oo ey ku noolyihiin dad isku wada fikir ah oo diiday in dad ka duwan ey ku dhex noolaadaan. Tusaale, qawmu Luudh looma cadaabin kaliya iney faaxishada sameyn jireen, laakiin cadaabku wuxuu u yimid markii ey yiraahdeen Luudh iyo inta rumaysay ka saara tuuladiina waa dad is dahirinayee. Eebe wuxuu yiri:
“waxayna aheyd jawaabtii qamkiisa ka bixiya Luudh iyo inta rumaysan tuuladiina waaba dad is dahirinayee. Waxaan korinnay Luudh iyo ehelkiisa – haweenaydiisii mooyee, oo kamid noqotay kuwa halaag ku hadhay. Waxaana kusoo daadinnay (roob naareed) bal day sideey noqotay cidhibtii denbiilayaasha”. Waana markaas markuu halaagu kusoo degay qawmkii nebi Luudh (CS), waayo waxay diideen kala duwanaanshaha, waxayna lasoo baxeen kalitalisnimo iyo amar ku taagleen.
Tusaalaha kale aan jeclahay inaan aqristaha dareensiiyo waa goortii nebi Muuse (CS) uu Eebe u diray inuu hadal jilicsan ku yiraahdo Fircoon isagoo ugu yeeraya inuu Eebe rumeeyo reer banuu israa’iilna uu adoonsiga ka joojiyo. Fircoon judhii horaba Eebe waa inkiray, wuxuuna qamkiisa ku yiri; dadoow ma ilaah aan aniga aheyn baa jira? Dood dheer ayaa dhexmartay nebi Muuse (CS) iyo Fircoon, oo xataa uu keenay saaxirintiisii falka u sameyn jiray ee uu aadka ugu kalsoonaa. Kolkikii dooda Fircoon looga guuleystay ayuu bilaabay inuu u hanjabo nebi Muuse iyo dadkii rumeeyay – isagoo wacad ku maray inuu laynayo oo ciqaab daran marsiinayo. Ugu danbeyntiina Fircoon iyo ciidankiisii waxey isku dayeen iney nebi Muuse iyo mu’miniintii la socotay xasuuqaan kadib markeey masar kasoo saareen, waana markaas goortuu ilaahey halaagay Fircoon iyo qamkiisa. Ilaahey (SWT) wuu u kaadsiiyay Fircoon iyo taageerayaashiisii, oo xataa dan kama gelin markuu Fircoon ilaahnimada sheegtay; ee waxaa la halaagay Fircoon markuu isku dayay kaligii talisnimo iyo amar kutaaglayn uuna isku dayay inuu laayo dadkii ka duwanaa ee mu’miniinta ahaa. Eebe SWT wuxuu yiri:
“markaasuu doonay Fircoon inuu ka saaro dhulka (nebi Muuse iyo inta rumaysay) markaasaan maansheynay isaga iyo intii la jirtay dhamaan”. Aayaddaan wuxuu Eebe noogu sheegayaa sababta loo halaagay Fircoon iyo qawmkiisa iney aheyd markey damceen iney ku xadgudbaan oo laayaan dadkii ka ra’yi iyo caqiido duwanaa, ee aan loo haligin gaalnimadooda oo qudha. Sababtoo ah kalinimo ilaahey cidaan isaga aheyn uma ogola, cid walba oo ilaahey ka sokeysaa waa iney aqbashaa cidda ka duwan; fikir, diin iyo dhaqan – haddaysan cadaawad iyo dulmi la imaaneyn. Cid walba oo isku dayda iney ku xadgudbaan dadka ka duwan, noocey doonaan ha uga duwanaandaan, ama diida isbedel, kala duwanaansho iyo horu-socod – waxay soo hoosgalayaan cinwaanka tuulooyinka; kuwaas uu Eebe balanqaaday inuu halaagayo ama cadaabayo cadaab darran kahor maalinta qiyaamaha sidaan kor kusoo aragnay.
-Suurat Al-acraaf 59
-Suurat Al-acraaf 80
-Patricia D Netzley The stone age
-Muham Taqra: Story of Prophet Jethro (Shuaib) & Prophet
Noah (Nuh) From Islam Faith (2014)
– Suuratu Huud 87
-Suurat Al-baqarah 170-171
-Surrat Al-israa’ 58
-Suurat Al-israa’ 103
La soco qeybta xiga…